Nooca Wareejinta Awoodda Awoodda Mashiinka Neefsashada Neefta Leh - Qaab -dhismeedka Awoodda Weyn ee Shiinuhu Bixiyaha Mashiinka Mashiinka Qaadista Hawada,Warshad –HX
Nidaamka Maamulka Tayada
Hoyga » Alaabta » Mashiinka Hawada
Nooca Wareejinta Awoodda Awoodda Mashiinka Neefsashada Neefta Leh
Nala soo xiriirSoo Degso
Hore : HXTUSD Double - hagaha kor u qaadista iyo dhaqaajinta isku -darka biraha
Xiga : HXUD Qalabka Mashiinka Qaadista Hawada
· Hawada cadaadisani waa isha korontada, 100% qarax-caddeyn, Waxaa lagu shaqayn karaa si joogto ah oo ammaan ah xaaladaha shaqada qaarkood ee halista ah sida guban kara iyo qarxa. Cadaadiska hawada lagu qiimeeyay waa 0.6MPa (0.1-0.6Mpa waxaa loo isticmaali karaa isku darka).
·Lagu dabaqi karo 250l rinjiga foostada furan, khad, waxyaabaha la isku qurxiyo iyo walxaha kale ee dareeraha kiimikada ah oo la isku qasay, qasid iyo kala firdhin.
· Waa la kicin karaa oo hoos loo dhigi karaa, iyo qalabka saddexaad ayaa gacanta lagu hayaa si kor loogu qaado oo loo dhejiyo dhexda., taasoo sahlaysa in si dhaqso ah loo dhaqaaqo loona badbaado gaadiidka.
· Heerka qaadista caadiga ah: 1050mm ee guluubiyaha dhulka ka dib markii la kiciyey (waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha foosto ee macaamiisha).
●Noocyada Muhiimka ah:
1. Isku-darka pneumatic-ka ayaa si qumman loo xakamayn karaa.
2. Isku-darka Pneumatic wuxuu u rogi karaa jihada hore.
3. Jawiga shaqada ee qasanka pneumatic saameyn kuma yeelato gariirka, high temperature, elektromagnetic, shucaac, iwm. Waxay ku habboon tahay jawiga shaqada ee adag waxayna si caadi ah ugu shaqayn kartaa xaaladaha xun ee guban kara, qarxa, hiheerkulka saregariir, huurka iyo boodhka.
4. Mashiinka Pneumatic-ka ah ee la jaanqaadaya isku-darka pneumatic-ka ayaa leh shaqo ilaalin xad-dhaaf ah mana shaqeyn doono cillad-darrada awgeed.
5. Isku-darka Pneumatic wuxuu leeyahay tiirar bilow ah oo bilaash ah waxaana si toos ah loogu bilaabi karaa culeys.
6. Isku-darka Pneumatic waa fududahay in la shaqeeyo lana ilaaliyo. Matoorka hawadu wuxuu leeyahay qaab -dhismeed fudud, cabbir yar, culeys yar iyo faras weyn. Hawada waxaa loo isticmaalaa dhexdhexaad, fududahay in la shaqeeyo oo si fudud loo dayactiro.
Isku-darka Pneumatic waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha leh shuruudaha looga baahan yahay waxyaabaha qarxa, sida batroolka, kiimiko ah, paint, rinji, alwaaxa, cuntada, kiimikaad maalinle ah iyo kuwo kale oo ololi kara, qarxa, boodh, culeys culus, qoyan iyo goobo kale oo shaqo.
Dayactirka iyo kormeerka qasanka waxay saameyn weyn ku leedahay nolosha adeegga iyo waxqabadka. Si si buuxda loogu fuliyo waxqabadka, hawo nadiif ah oo qalalan waa in la isticmaalaa. Miridhku iyo qoyaanka tuubbada ku jirta kombaresarada hawada waa in la sifeeyaa oo laga saaraa kahor isticmaalka. Ku rakib shaandhooyin ama saddex mataano fiican. Fadlan u isticmaal inta u dhexeysa heerka cadaadiska hawada ee 5-8kg / cm2. Haddii cadaadiska sare uu ka bato heerkan cadaadiska ah, cillad ayuu keenayaa. Haddii cadaadiska uusan ku filneyn, waxqabadka ma awoodi doono in lagu dadaalo. Si loo ilaaliyo waxqabadka xasiloon, waa in pneumatic la siiyaa. Saliida qalabka, saliid aan ku filnayn ayaa sababi doonta aaladda inay kululaato, keenaya xirasho, awood ku filan, hoos u dhaca waxqabadka, iwm, saameyn weyn ku leh nolosha qalabka.
Dhexroor dhexroor usheeda dhexe (mm)
Nafaqada la adeegsan karo
Shirkad / Urur:
Gawaarida Hawada ee Vane
Mashiinka Hawada aan saliida lahayn
Mashiinka Birta ahama ee ahama
Mashiinka Hawada Piston
NAGA SOO ROODA WARBAAHINTA BULSHADA
Xuquuqda daabacaadda © 2017 Rudong Hongxin Makiinado Co., Ltd. Taageerada Meeall.